စွန့်ပစ်ခံထားရတဲ့ မွေးကင်းစကလေးကို သူ့ကလေးတွေနဲ့အတူ စောင့်ရှောက်ထားတဲ့ ခွေးမေမေကြီး - Update News
Villagers in Lormi village, Chhattisgarh district, India, heardababy crying and foundanewborn baby inahaystack. In the haystack we also sawamother dog and her children.
The baby wasagirl who arrived inahaystack and was abandoned. But the mother dog is taking care of the baby with her puppies. The baby isanewborn baby, so the umbilical cord has not been cut and no clothes are included.
But the mother dog kept the baby warm and safe. In December, the weather is very cold at night. A villager who first saw the baby said that the baby was still alive because of the warmth of the dogs and the warmth of the bitch.
The baby has now been taken to hospital. The baby, who survived, was named Akanksha. The name impliesastrong desire. Indian police officer Dipanshu Kabra took to Twitter to say that the abandonment of infants was on the rise and that such incidents could not be forgiven and should be effectively punished.
အိန္ဒိယနိုင်ငံ Chhattisgarh ခရိုင် Lormi ရွာက ရွာခံတွေဟာကလေးငိုသံကြားလို့ လိုက်ရှာကြည့်လိုက်တဲ့ အခါ ကောက်ရိုးပုံထဲမှာ မွေးကင်းစကလေးလေးတစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ကောက်ရိုးပုံထဲမှာ ကလေးမွေးထားတဲ့ ခွေးမေမေတစ်ကောင်နဲ့ သူ့ကလေးတွေကိုလည်း တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
မွေးကင်းစကလေးလေးက မိန်းကလေးဖြစ်ပြီးတော့ ကောက်ရိုးပုံထဲမှာ လာပြီးစွန့်ပစ်သွားခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ခွေးမေမေက လူသားကလေးလေးကိုသူ့ကလေးတွေနဲ့ အတူတူ စောင့်ရှောက်ပေးနေတာပါ။ ကလေးလေးက မွေးကင်းစကလေးလေးဖြစ်တာကြောင့် ချက်ကြိုးတောင် မဖြတ်ရသေးပါဘူး။အဝတ်အစားလည်းမပါလာပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ခွေးမေမေက ကလေးလေးကို အန္တရာယ်မဖြစ်အောင် နွေးနွေးထွေးထွေး စောင့်ရှောက်ပေးထားပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလဆိုတော့ ညဘက်မှာ ရာသီဥတုက ခိုက်ခိုက်တုန်အောင် အေးတယ်။ ခွေးလေးတွေရဲ့အနွေးဓါတ်နဲ့ ခွေးမကြီးရဲ့အနွေးဓါတ်ကြောင့် ကလေးလေးက အသက်ဆက်ရှင်နေတာပဲဖြစ်မယ် လို့ ကလေးလေးကို စတင်တွေ့တဲ့ ရွာသားတစ်ယောက်က ပြောပါတယ်။
အခုတော့ ကလေးလေးကို ဆေးရုံကို ခေါ်သွားလိုက်ပါပြီ။ ကံကောင်းလို့ မသေခဲ့တဲ့ ကလေးလေးကို Akanksha လို့ နာမည်ပေးလိုက်ကြပါတယ်။ နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒ ပါ။ မွေးကင်းစကလေးတွေကို စွန့်ပစ်မှုဟာ ပိုပိုများလာကြောင်း ဒီလိုအဖြစ်တွေက ဘယ်လိုမှခွင့်လွှတ်ပေးလို့ မရကြောင်း ထိထိရောက်ရောက် အပြစ်ပေးသင့်ကြောင်း အိန္ဒိယရဲအရာရှိ Dipanshu Kabra က သူ့ရဲ့ Twitter မှာ တင်ထားခဲ့ပါတယ်။
အိႏၵိယႏိုင္ငံ Chhattisgarh ခ႐ိုင္ Lormi ႐ြာက ႐ြာခံေတြဟာကေလးငိုသံၾကားလို႔ လိုက္ရွာၾကည့္လိုက္တဲ့ အခါ ေကာက္႐ိုးပုံထဲမွာ ေမြးကင္းစကေလးေလးတစ္ေယာက္ကို ေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။ ေကာက္႐ိုးပုံထဲမွာ ကေလးေမြးထားတဲ့ ေခြးေမေမတစ္ေကာင္နဲ႔ သူ႔ကေလးေတြကိုလည္း ေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။
ေမြးကင္းစကေလးေလးက မိန္းကေလးျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေကာက္႐ိုးပုံထဲမွာ လာၿပီးစြန႔္ပစ္သြားခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ ေခြးေမေမက လူသားကေလးေလးကိုသူ႔ကေလးေတြနဲ႔ အတူတူ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနတာပါ။ ကေလးေလးက ေမြးကင္းစကေလးေလးျဖစ္တာေၾကာင့္ ခ်က္ႀကိဳးေတာင္ မျဖတ္ရေသးပါဘူး။အဝတ္အစားလည္းမပါလာပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ ေခြးေမေမက ကေလးေလးကို အႏၲရာယ္မျဖစ္ေအာင္ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ေစာင့္ေရွာက္ေပးထားပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာလဆိုေတာ့ ညဘက္မွာ ရာသီဥတုက ခိုက္ခိုက္တုန္ေအာင္ ေအးတယ္။ ေခြးေလးေတြရဲ႕အေႏြးဓါတ္နဲ႔ ေခြးမႀကီးရဲ႕အေႏြးဓါတ္ေၾကာင့္ ကေလးေလးက အသက္ဆက္ရွင္ေနတာပဲျဖစ္မယ္ လို႔ ကေလးေလးကို စတင္ေတြ႕တဲ့ ႐ြာသားတစ္ေယာက္က ေျပာပါတယ္။
အခုေတာ့ ကေလးေလးကို ေဆး႐ုံကို ေခၚသြားလိုက္ပါၿပီ။ ကံေကာင္းလို႔ မေသခဲ့တဲ့ ကေလးေလးကို Akanksha လို႔ နာမည္ေပးလိုက္ၾကပါတယ္။ နာမည္ရဲ႕အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ျပင္းျပတဲ့ဆႏၵ ပါ။ ေမြးကင္းစကေလးေတြကို စြန႔္ပစ္မႈဟာ ပိုပိုမ်ားလာေၾကာင္း ဒီလိုအျဖစ္ေတြက ဘယ္လိုမွခြင့္လႊတ္ေပးလို႔ မရေၾကာင္း ထိထိေရာက္ေရာက္ အျပစ္ေပးသင့္ေၾကာင္း အိႏၵိယရဲအရာရွိ Dipanshu Kabra က သူ႔ရဲ႕ Twitter မွာ တင္ထားခဲ့ပါတယ္။
← A woman walks around the city naked, painted in the form of trousers
လင်နဲ့မယား လျှာနဲ့သွားဆိုပေမဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်တိုင်း သတိထားဆင်ခြင်ရမည့် အချက်(၁၀)ချက် →
သားဖြစ်သူရဲ့ ခွဲစိတ်စရိတ်မတတ်နိုင်လို့ လမ်းဘေးမှာအရိုက်ခံပြီး ငွေရှာနေတဲ့ဖခင်
လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းက အတွင်းထဲအထိ ဟိုနှိုက်သည်နှိုက်ရှာဖွေမှုကြောင့် ငိုခဲ့ရတဲ့သတင်းထောက်
မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မှာ သတိုးသမီးဖခင်က သားမက်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကား မှတ်သားထိုက်လို့မှတ်မိနေတယ်
ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ6ပေခန့်အမြင့်ရှိသောကြွက်ကြီးအား ရေဆိုးမြောင်းထဲမှတွေ့ရ